facebook ပုံပါတာလေး « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
Feb10 by ချစ်သူအတွက်
ဒီတစ်ခါတော့ သင်တို့ရဲ့ facebook စာမျက်နှာကို better facebook လုပ်ကြရအောင်။
ပီးရင် သင်အခုသုံးနေတဲ့ အင်တာနက်ကြည့် software ကိုရွေးပါ။
Mozilla Firefox တို့ Chrome စသည်ဖြင့်ပေါ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြား software တွေကို အသံးနည်းပါတယ်။
ကဲပီးရင် သူက ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Mozilla ဆိုရင် add_ons ကရတာနဲ့ run မလားမေးလိမ့်မယ်။
Run ( Installation) လုပ်လိုက်ပါ။
Mozilla ခဏ restart ကျသွားပီးပြန်ပေါ်လာရင် ရပါပီ။
သင့် facebok စာမျက်နှာအတွက် မေးခွန်း ၁၀ ခုမေးပါလိမ့်မယ်။
သင်မဖြေတတ်ရင် အားလုံးကို next နှိပ်လိုက်ပီး ကျော်လိုက်ပါ။
ကဲ အပေါ်ဆုံးဘားမှာ ရှိတဲ့ ခက်ရင်းခွပုံလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။
ဒါမျိုးလေးစတွေ့နေရရင် အပေါ်က Social Fixer Options ကို ရွေးလိုက်ပါ။
အလွယ်ဆုံးကတော့ Themes ကိုရွေးပီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဟာကို click လုပ်ပီး save လုပ်နိုင်ပါတယ်။
save မလုပ်ချင်သေးရင်လဲ preview လုပ်နိုင်ပါတယ်။နမူနာပြပါလိမ့်မယ်။
ကဲနောက်ထပ် အလန်း တွေကို ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ ကိုယ်တိုင် CSS code ရေးနိုင်ကြပါတယ်။
နားမလည်သူတွေအတွက်ကတော့ သူများရေးထားတာတွေကို ကူးရတာပေါ့။
ကဲဒီကို သွားပီး ကူးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာကလည်းဆိုဒ်ကောင်းလေး တစ်ခုပါပဲ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ theme ကို left column ၇ှိ အမျိုးအသားနေရာမှာ ရွေးချယ်ကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်ရွေးလိုက်ပီးရင် ဒီလိုပေါ်လာရင် Make The My Facebook Skin! ဆိုတာကိုေ၇ွးလိုက်ရင် ရပါပီ။
http://userstyles.org/ ဒီနေရာကတော့ နာမည်ကြီး နေရာတစ်ခုပါ။ သူကတော့ code တွေကိုပါ ဖော်ပြပေးပါတယ် ကိုလိုသလို ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်။
သူ့ကို တိုက်ရိုက်သုံးချင်ရင်တော့ Mozilla မှာပဲရပါတယ်။
Mozilla add_ons ကနေ stylish ဆိုသော အရာကို ရွေးပီး Install လုပ်ထားလိုက်ရင် တိုက်ရိုက်သုံးနိုက်ပါပီ။
mozilla ဆိုရင် တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်ပီး
You must usearecent version of one of these browsers:
Install the Stylish add-on for Firefox: Stylish for Mozilla Firefox
Visit my user page on UserStyles.org foralist of my Styles
Click the link to the style you wish to install
On the right of the style’s page, click the Install button. You will be presented withadialog box. At this time you can click the Preview button to see the change before saving. Click Install to install the theme.
Method 1: Stylish for Google Chrome
Install the Stylish add-on for Chrome: Stylish for Google Chrome
Method 2: Facebook.Themed
Some of my Facebook themes (and alterations of them) are available as part of the Facebook.Themed. add-on
Install the Facebook.Themed add-on for Chrome: Facebook.Themed.
For more info, visit the Color The Web facebook page: http://www.facebook.com/colortheweb
Chrome မှာ background လေးပဲချိန်းတာပါ။
video လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ ရှင်းပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးအဆင့် (၃)ဆင့်ပါ အခုပုံလေးက အလယ်က facebook ပုံပါတာလေးကို နှိပ်ပီးဆက်လုပ်ကြတာပေါ့။
ကျွန်တော့် facebook style က တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ် ဗျ။ အဲတာကတော့ facebook Time Line ကို သုံးထားတာပါ။
This entry was posted in နည်းပညာ, ဗဟုသုတ.
ဘ၀ တွင် ရှုံးနိမ့်ရခြင်း တရားဆယ်ပါး →